Faritra Bongolava - Wikipedia
Ny Faritra Bongolava dia isan' ireo faritra 23 mandrafitra ny firenena malagasy. Ao anatin' ny faritanin' Antananarivo teo aloha no misy azy. Distrika roa no mandrafitra ny Faritra Bongolava, dia ny Distrikan' i Tsiroanomandidy (renivohitry ny faritra) sy ny Distrikan' i Fenoarivobe. Ny Faritra Betsiboka, Melaky, Menabe, Vakinankaratra, Itasy ary Analamanga no mamaritra azy.
4 Distrika ao amin' ny Faritra Bongolava
Tamin' ny Repoblika voalohany dia tao anatin' ny Fileovan' Itasy no nisy ny faritr' i Bongolava. Rehefa niova ny rafitry ny fitsinjaram-pahefana, tamin' ny Repobika faharoa, dia isan' ireo fivondronana 19 mandrafitra ny Faritanin' Antananarivo, ireo distrika roa, Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe. Ankehitriny, tamin' ny fametrahana ireo faritra 23 eto Madagasikara, dia natsangana ho faritra i Bongolava ka i Tsiroanomandidy no renivohitr' izany. Ny lehiben' ny faritra dia i Jean Claude Rabarijaona.
Ny faritra Bongolava dia isan' ny faritra mivelona amin' ny fambolena sy fiompiana. Isan' ny mpamatsy ny renivohitr' i Madagasikara izy eo amin' ny lafiny vary, katsaka. Raha ny fiompiana kosa no asian-teny, dia ny fiompiana omby no mampalaza azy indrindra. Ao Tsiroanomandidy rahateo no misy ny tsenan' omby lehibe indrindra eto Madagasikara. Saika miondrana ao Antananarivo avokoa moa ireo omby ireo.
Faritra azo sokajiana ho faritry ny mpifindra monina iny tapany andrefana amin' ny faritanin' Antanaanrivo teo aloha iny. Tsy mahagaga raha hita ao Tsiroanomandidy avokoa ireo foko 18 misy eto Madagasikara.
Distrika ao amin' ny Faritra BongolavaHanova
Faritany sy faritra eto Madagasikara: Faritanin' Antananarivo (Faritra Itasy - Analamanga - Bongolava - Vakinankaratra) - Faritanin' Antsiranana (Faritra Diana - Sava) - Faritanin' i Fianarantsoa (Faritra Atsimo-Atsinanana - Amoron'i Mania - Ihorombe - Matsiatra Ambony - Vatovavy-Fitovinany) - Faritanin' i Mahajanga (Faritra Boeny - Betsiboka - Melaky - Sofia) - Faritanin' i Toamasina (Faritra Alaotra-Mangoro - Analanjirofo - Atsinanana) - Faritanin' i Toliara (Faritra Atsimo-Andrefana - Anosy - Androy - Menabe)
Site non-officiel sur la région Bongolava
Region du Bongolava Archived Septambra 25, 2008 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faritra_Bongolava&oldid=1044867"
Dernière modification le 13 Mey 2022, à 05:08
Voaova farany tamin'ny 13 Mey 2022 amin'ny 05:08 ity pejy ity.